China HCG Kubata Pamuviri Pakati fekitori uye vanotengesa | ZVINOKOSHA
1.One Imwe Nhanho HCG Kubata Pamuviri nepakati
Tsanangudzo 3.0mm 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm
Pashure: HCG Kubata Pamuviri Kaseti
Zvadaro: HCG Kubata Pamuviri Bvunzo
1) Bvisa tsvimbo yekuyedza kubva muhombodo
2) Bvisa chivharo kuti ubudise pachena tip absorbent
3) Bata tsvimbo nekubata chigunwe nechigunwe chakabuditswa chinonongedza pasi. Weti pazano rinopinza chete kusvikira ranyorova.
4) Isa tsvimbo yekuyedza pasi pakapfava ne windows pamusoro apo iwe wakamirira bvunzo. Verenga mhinduro mune imwe kusvika kumaminetsi mashanu .DO USADudzira MHURI PASHURE pemaminetsi mashanu.
5) Rasa bvunzo yekuyedza mushure mekushandisa kamwechete muguruva.